Vavak'i Santa Muerte hanjakazakan'ny lehilahy [+]?
Vavaky ny Fahafatesana Masina hanjaka amin'ny lehilahy iray Ny fahitan'ny olona maro ny fivavahana katolika na finoana kristiana dia fiheverana ny olona avy amin'ny vazimba teratany any Mexico.
Na izany aza, ary na dia sary demonia aza no fahitana azy, ny marina dia nanampy olona maro ity olo-masina ity ary manana hery manokana amin'ny tranga izay misy ny fahatsapana.
1 Vavak'i Santa Muerte hanjaka amin'ny lehilahy Iza no Santa Muerte?
2 Vavaky ny Fahafatesana Masina hanjaka amin'ny lehilahy iray
2.1 Inona ary ity vavaka ity?
2.2 Rahoviana aho no afaka mivavaka ny vavaka amin'i Santa Muerte?
Vavak'i Santa Muerte hanjaka amin'ny lehilahy Iza no Santa Muerte?
I Santa Muerte dia aseho ho toy ny olo-malaza mino izay ankalazaina any amin'ny tanàna amerikana latina maro, ny ankamaroany any Mexico izay ankalazaina ho toy ny antokom-pivavahana iray mahazatra.
Misolotena amin'ny tarehimarika skeletal izay afaka miakanjo amin'ny loko hafa rehetra fa ilay maneho azy io no tena mainty.
Matetika ny mpanara-dia azy dia mahatsiaro fa nolavina satria nanome voninahitra ny olo-masina iray izay tsy eken'ny fiangonana katolika izany fa ny fo sy ny finoan'ny maro dia Saint-ny tahaka ny hafa rehetra.
Hoy izy ireo tsia manaitra tahotra nefa manaja ary matoky ary io farany io no mahatonga ireo izay mivadika ho mpino.
Mandoro tantely mandoro, mankahala. Tsapako ho anao______________,
Ary tsapanao ho ahy ny eritreritrao sy ny fahatsapanao ...
Manjaka tanteraka ny sainao aho ary ny asanao dia miankina amin'ny herin'ny Fahafatesana.
Miantso anao aho ____________________ mila anao ianao __________________ Andao hitady ahy __________________ ary miankohoka eo anatrehako ianao. _________ asehoy ahy ny fitiavanao rehetra.
_____________ Mankanesa eo an-tongotro, tanteraho izay rehetra angatahiko aminao. Andriambavin'ny alina, Ramatoa manerantany ary ny heriny ety an-tany ...
Hanan-kery sy manjakazaka amin'ny saina, ny fihetsika ary ny fon'ny __________________ Andriamatoa tompoko, ianao ilay Fahafatesan-tsofiko itondrà ahy a_______________ voaaro eo anoloako.
Enga anie ny tongony ho tonga amiko, Enga anie hanisy fitiavana ahy ny fony, Enga anie ny vatany irery no mila ahy? Ny fitiavany no atolotro azy.
Ry malalako, aza omena minitra fahafinaretana ve na manome toky ny _____________ Raha tsy miaraka amiko ianao dia aza avela hisy vehivavy manatona anao Ary raha manatona anao izy, dia hamindra azy ireo tsy hitanao intsony.
Raha tsy ho ahy, dia tsy ho an'iza na iza, Andriamatoa Fahafatesana, Mahery Be, mangataka aminao amin'ny fanolorako tanteraka aho fa omenao ny _____________________ fahasambarana miaraka amiko. Ny fofom-pako dia mivezivezy amin'ny alàlako ary miantso anao aho. Ny fonao, ny fisainanao ary ny vatanao manomboka izao dia ho azy ireo ary ho ahy mandrakizay mandrakizay.
Amin'ny anaran'ilay Fahafatesana Sambatra no anontaniako anao. Mitondra ahy am-pitiavana ilay ramatoa Dominikana.
Ary nitolo-batana tamin'ny zavamaniry mba hanarahana sy haneho ahy ny fitiavana rehetra Inona no tsapanao momba ahy. Santísima Muerte, ianao izay mampihetsika ny angovo lehibe indrindra sy sarotra indrindra eo amin'izao rehetra izao, manondroa ________________ Na dia iray amin'ireo toerana maizina indrindra aza izany dia apetraho eo alohako A _______________ ary avelao hiampita eo akaikiko ny lalany.
Santísima Muerte ianao izay mety ho arivo Ianao izay mety ho iray tapitrisa, ento aty amiko _____________ Ary ny fitiavana ahy no angatahiko ny soavalinao dia ento eo alohako ilay izy, atsipy eo amiko ilay lefona , izay mampatsiahy ahy, mahatsapa fa eo aho ...
Na iza na iza miaraka aminy sy amin'ny toerana misy azy Lady of the night, Andriambavin'ny andro, mangataka aho mba homba ahy hatrany ny fanahin'i____ ...
Tiako fotsiny izy, fa izy ihany no manana maso ho an'ny Fahafatesako Sambatra mamatotra _____________________
Ny foko sy ny vatako Vatana, saina ary fanahin'i _______________ tongava amiko nony alina ary mandritra ny andro dia hiaraka amiko ianao azafady, mangataka aminao amin'ny anaran'ny Santísima Muerte Santísima Muerte aho hanome ahy ny hery, ny fo…
Ary ny totalin'ny fehizoro ao amin'ny tanànan'i Santísima Muerte dia miangavy anao aho mba ho mpiaro ahy Ary manatanteraka ny soa rehetra angatahiko aminao ianao.
Ny Fahafatesana Sambatra Dia aza atao tsinontsinona ahy ny Fahafatesana Sambatra mitondra ahy ho any amin'ny ______________!
Io elatra Santa Muerte hanjaka amin'ny lehilahy sarotra io lehibe iny fa matanjaka.
Tsy vavaka feno fitiavan-tena akory, dia vavaka hangataka ny herin'ny maha-olona ny mahita izay hanova ny sainy.
Tsy momba ny fanalam-baraka na ny fanaovana ny hafa hanao ny sitrapontsika no hanampiana azy ireo hahita ireo safidy izay, araka ny voalazanay, no tsara indrindra.
Inona ary ity vavaka ity?
Ity ary ny vavaka rehetra Izy ireo dia tena mahery, azonao atao isaky ny mandia fotoan-tsarotra tsy hitanao intsony izay tokony hatao.
Eto amin'ity resaka vavaka manokana ity, izay katsahina dia ny ahafahana manjaka amin'ny olon-kafa amin'ny alàlan'ny vavaka iray ary azo atao izany raha manam-pinoana ianao.
Rahoviana aho no afaka mivavaka ny vavaka amin'i Santa Muerte?
Fotoana tianao izany.
Betsaka ny olona no nanoro fa tsara indrindra ny mijanona ho irery ary manomana ny tontolo iainana, mba tsy hanan-kery amin'ny alàlan'ny vavaka ny angovo ratsy.
Ny firaisana izay angatahina ho takiana takiana dia ny hananana finoana be dia be satria tsy afaka mivavaka isika raha tsy mino fa ny fangatahana dia azo amin'ny fomba mahagaga.
Mitadiava fahasambarana am-pitiavana miaraka amin'ny vavaky ny Fahafatesana Masina hanjaka amin'ny lehilahy iray.
Ny vavaka Famonoana Masina ho an'ny asa